Solika – Politika
Étiquette : <span>Solika</span>
28 août 20197 mai 2020Tafatafa, Toe-karena
« Fifampiraharahana hametrahana vidin-tsolika mirary eo amin’ny fiaraha-monina » Mba azonao ambara fohifohy aminay ve ny amin’ny fitantanana ny vidin-tsolika? Araka ny lalàna 2004-003 dia nohalalahana ny sehatry ny solitany malagasy tamin’ny fiantombohan’ny taona 2000. Vokatry ny fisondrotan’ny vidin-tsolika tsy an-kijanona teo amin’ny tsena anatiny anefa dia nanomboka niditra an-tsehatra teo amin’ny fitantanana ny fanjakana tamin’ny taona...
Tsy azo ihodivirana ny fampiasana solika. Singa iray manan-danja tokoa ho an’ny toe-karena izy io. Misy fifanandrinana manodidina ny resaka solika amin’izao fotoana izao. Mihenjan-droa ny tady. Noraisin’ny filohan’ny repoblika an-tanana avy hatrany ny famahana ny olana. Misy tandindom-pifandonana ao an-tsaham-pihariana. Tsy ho mora ny hibata fandresena. anaty tebiteby no nanarahan’ny mpamily ny vidin-tsolika eny...